Gufgaf|Online हरिहरको मन नपर्ने बानी
हरिहरको मन नपर्ने बानी
गफगाफ- ज्योतिषबाट परिचय कमाएका हरिहर अधिकारीले सिनेमा शुभलभ सँगै अभिनय यात्रा शुरु गरेका छन् । अधिकारी अभिनित सिनेमा चैत १५ गते शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । ज्योतिष र माँयाप्रेम को कथामा बनेको सिनेमाको ब्यापार औसत छ । सिनेमा आउनु अघि हजारौको भविष्यबाण्ी गरेका अधिकारीलाई हामीले चैं तपाईको सिनेमाको चर्चा त भयो अपेक्षीत व्यापार त गर्न सकेन नि किन हो तिथी मिलेन कि अभिनय भनेर कुरा थालेका छौं
यस्तो हो व्यक्तिको भविष्यबाणी र सिनेमाको व्यापार फरक कुरा हो । व्यक्ति व्यक्ति हो सिनेमा टिम हो । एउटा सिनेमा बन्दा झण्डै सय भन्दा बढी मान्छेको परिश्रम र सपना हुन्छ जोडिएको हुन्छ । यो व्यापारको कहिले काँहि तलमाथी हुन्छ यो त्यै भएको हो ।
अब चैं अरु रमाईलाई प्रश्नहरु तपाईलाई , आफैँलाई मन नपर्ने आफ्नो बानि के हो ?
म अलिकती अल्छि छु ।
तपाईले अहिले सम्म लिनुभएको सबैभन्दा गाह्रो निर्णय के हो ?
मैले लिएको सबैभन्दा गाह्रो निर्णय भनेको ज्योतिष शिक्षा लिएर पढ्छु...भन्ने निर्णय नै हो ।
शुरुशुरुमा परीवार बाट कस्तो सर्पोट पाउनुभएको थियो ?
परीवारबाट राम्रो सर्पोट थियो तर छिमेकिहरुले चैँ यास्तो पेशामा नलागेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु गर्थे ।
कुनै ठाउँमा ओभर एक्टिङ गर्नु भएको छ कि छैन ?
फिल्ममा कुनै कुनै ठाउँमा आफैँलाई ओभर एक्टिङ गरेको हो कि भन्ने फिल भएको थियो ।
तपाईलाई अहिले सम्म चिठ्ठा परेको छ ?
बच्चा बेलामा चाउचाउ मा दुई रुपैँया,पाँच रुपैँया पर्थ्यो । त्यो बाहेका जिन्दगीमा अहिले सम्म चिठ्ठा परेको छैन ।
ब्रेकअप अनुभव कत्तिको लिनुभएको छ ?
छ । आजभन्दा लगभग तिन बर्ष अगाडि मेरो ब्रेकअप भएको थियो । लगभग ५—६ बर्ष रिलेसनमा बसेर ब्रेकअप हुँदा साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ । खान मन नलाग्ने,जो केटि देखे पनि उ जस्तै लाग्ने यस्तै यस्तै हुँदोरहेछ ।
तपाईलाई एकदमै रिस उठ्दा कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म त्यस्तो नहुने शव्द त बोल्दिन त्यहि कुकुर, फटाहा यस्तै यस्तै चै प्रयोग हुन्छ कहिले काहि ।
कुनै कार्यक्रममा जाँदा आफ्नो जस्तै लुगा लगाएको व्यक्ति भेट्नुभएको छ ?
एउटा कार्यक्रममा जाँदा एकजनाले ठ्याक्कै मेरो जस्तै कपडा लागाउनु भएको रहेछ । अफ्ठ्यारो लाग्यो । त्यस पछि हत्तनपत्त गाडिमा गएर अर्को कपडा चेन्ज गरेँ ।
तपाई आफुलाई अहिले सम्म युटुबबाट आएको कमेन्ट मध्ये एकदमै चित्त दुखेको कमेन्ट कुन हो ?
एक जनाले यो मान्छेले ज्योतिष भएर पनि चलचित्रमा काम गरेछ अब यो मान्छेको ज्योतिष सकिन्छ भन्ने कमेन्ट गर्नुभएको थियो । यस्मा चैँ मलाई एकदमै चित्त दुखेको थियो ।